I-MoviePass yenza okungenangqondo okuningi ku-2018 ukuthi cishe abasebenzisi abangu-60% baye bakhansela izikhangiso zabo - BGR - TELES RELAY
Accueil » UMNOTHO I-MoviePass yenza okungenangqondo okuningi ku-2018 ukuthi cishe abasebenzisi abangu-60% baye bakhansela izikhangiso zabo - BGR
I-MoviePass yenza okungenangqondo okuningi ku-2018 ukuthi cishe abasebenzisi abangu-60% baye bakhansela izikhangiso zabo - BGR
Ku-2018, ibhizinisi le-MoviePass laliyisihogo. Insizakalo yokukhangisa nge-movie yashaya ithani lababhalisile, yahambisa izinguquko ezihlukahlukene zokudideka kanye nezinyathelo zezimali eziphuthumayo ezisezingeni eliphuthumayo ngemuva kwezigcawu zokukhokhela ukuphazamiseka. Le nsizakalo nayo kwadingeka ibhekane nokushicilelwa kwezindaba ezibeka inkampani ngaphansi kokuhlolisiswa njalo, futhi iNew York Attorney General yaze yavula uphenyo lwenkohliso enkampanini yomzali wenkonzo, ngesilinganiso esihle.
Akumangalisi ukufunda ukuthi cishe abangu-60% wabasebenzisi be-MoviePass bakhansele ukubhalisa kwabo kwe-2018.
Lokhu kubonakaliswa ukuhlaziywa okusha kwesicelo sezimali se-Trim, esihlola izigidi ze-400 zokuthengiswa komsebenzisi ku-2018. Idatha yakhe ibonisa, phakathi kwezinye izinto, ukuthi ukukhansela okuningi kwenzeka ehlobo. Ngokuqondile, ngoJuni noJulayi, lapho isimemezelo sezindaba ezimbi ze-MoviePass kubonakala sengathi sisezingeni eliphezulu. Kwakusekuseni lapho sifunde ukuthi i-AMC iqalise uhlelo lwayo lokubhalisa ngokuncintisana, i-MoviePass ibonakala iphelelwe isikhathi sesabelomali futhi yayingavumeli abasebenzisi ukuthi bathenge amathikithi I-studio enkulu kakhulu ye-studio blockbusters nge-app.
uzoyikhumbula njengenhlobo ye-Netflix yama-movie buffs. Khokha iphakheji, futhi uzobona inani lamabhayisikobho endaweni yaseshashalazini.
Konke kwaqala ngezifiso ezinjalo. I-CEO ye-MoviePass, uMitch Lowe, owayengumholi weNetflix ne-Redbox, cishe wayenayo impahla ukuze iphumelele. ULowe utshele BGR Iminyaka emibili edlule, umkhiqizo walolu hlobo uhlobo oluhle kakhulu, ngoba izinkulungwane zeminyaka zizokwamukela ukubhalisa - "futhi, ngendlela, i-75% ababhalisile bethu sekuyiminyaka eyizinkulungwane. "
Akudingeki ukuthi, konke akusebenzi kahle kusukela kusukela.
Sizobona ukuthi isimo sizoshintsha kulo nyaka. Ekupheleni kwe-2018, i-MoviePass yamemezela isakhiwo esisha sokulinganisa amanani amathathu ukuze sishintshe uhlelo lwaso lwamanje. Amacebo manje avela ku-9,95 $ ngenyanga kuya ekupheleni okuphansi kwe-24,95 $ phezulu. Izinzuzo ziyamangalisa, kufaka phakathi ukukhetha okukhethwa kukho kwama-movie ezansi, kanye nakho konke okwenzeka kumabhayisikobho kususa ama-movie ku-3D naku-IMAX. kufaka ama-movie we-3D ne-IMAX ngalolu hlelo.
Umthombo wesithombe: I-Cummings Function / AP / REX / Shutterstock
I-Cameroon: Ukulahlekelwa kwesabelomali kwandiswe ku-662 billion FCFA ekupheleni kukaSepthemba 2018
I-Cameroon - I-Budget ye-2019: I-FCN ye-237 yezigidi ze-Central Region